🥇 ▷ Spotify wuxuu soo ceshanaaa widget-ka wuuna hagaajiyaa: hadda cusbooneysii! ✅
Spotify wuxuu soo ceshanaaa widget-ka wuuna hagaajiyaa: hadda cusbooneysii!
Macno malahan in codsigu uu ilaaliyo ikhtiyaarada aan dhamaadka lahayn, xaqiiqdi waxaa jira xoogaa la taaban karo oo adeegsadayaasha qaarkood ay jecel yihiin inkasta oo ay badanyihiin xitaa ha ka gaabin helitaankeeda. Widgets-ku waa tusaale wanaagsan: in kasta oo ay ku jiraan qalqal, shaki kuma jiro inay waxtar u leeyihiin isticmaaleyaasha qaarkood; sidaa darteed muranka ayaa lala xiriiri doonaa ka dib markii meesha laga saaro widget-ka Spotify.
Ku soo dhawow farqiga loo yaqaan ‘Spotify widget’: appku wuxuu ku xirayaa cusbooneysiinta
Caadi ahaan ma u maareeysaa muusigga Spotify muusiggaaga qalabkaaga Android? Waxaan haynaa warar xun: barnaamijku wuxuu ku dhammaanayaa iyada oo ku socota cusboonaysiinteedii ugu dambeeyay.
Widiyaha kor ku xusan wuxuu oggol yahay inuu arko heesta ka ciyaareysa miiska taleefanka iyadoo bixineysa kontoroolka ciyaarta. Ma ahayn qalab aad u muhiim ah sababta oo ah isla macluumaadka ka muuqataa shaashadda qufulka marka lagu daro ogeysiinta, laakiin khaladna ma leh in isaga laga saaro. Marka waad ogtahay: haddii aad dooneysay soo laabashada widget-ka Spotify waad nasiib badan tahay.
Qalabka loo yaqaan ‘Spotify widget’ wuxuu ku soo noqonayaa nooca xasilloonida ee ugu dambeeyay ee barnaamijka Android
Waxay ahayd muddo gaaban oo cadaalad ah, in ka yar bil. Intii lagu jiray muddadaas Spotify wuxuu si ku-meelgaar ah u miiray muuqaalka muuqaalka muuqaalka si uu si cadaalad ah u casriyeeyo. In kasta oo ay kujirto horumarin aad waxtar u leh: widget-ka hadda waa la bedeli karaa halkii aad ka joogsan lahayd xaddiga go’an ee 4 x 1 ee sare. Tani waxay fududaynaysaa hawsha ku-habboonaynta shaashad kasta, iyada oo aan loo eegin baaxadda isku xirka dalabka.
Sidii caadiga ahayd, si aad ugu soo celiso widget-ka taleefankaaga casriga ah ee ay tahay inaad ku dhigato cusboonaysiiso barnaamijkaaga ‘Spotify’ ee loogu talagalay Android. Nooca shaqeynaya waa lambarka 8.5.22.734. Oo waxaa laga heli karaa dukaanka Google Play: waa inaad ka cusbooneysiiso dukaanka appka ee Android.
Codsiga muusikada ugu wanaagsan ayaa la cusbooneysiiyaa: kani waa Poweramp-ka cusub
Haddii aad raadineyso codsi muusig oo wanaagsan, Poweramp ayaa hadda heshay cusbooneysiin weyn oo ka farxin doonta taageerayaasha muusikada.
Ka dhaaf suurtagalnimada cabbirka, widget-ka si xad dhaaf ah isma beddelayn. Waxay sii wadaysaa inay muujiso daboolka heesaha ciyaaraya oo ay sii wado badhamada xakamaynta. Waxaan rajeyneynaa in Spotify uu cusbooneysiin doono tusi waqtiga heesaha, wax hore uga dhacay ogeysiiska.
Spotify: muusig iyo muuqaallo